Kingdom: Ashin of the North – Gold Channel Movies
Video Sources 19004 Views Report Error
And so it begins.Jul. 23, 2021South Korea93 Min.TV-MA
Kingdom season 1 မှာပြီးသွားတဲ့ ကပ်ရောဂါကြီးဟာ Season2မှာတော့ ပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းအပင်ကြောင့် ပိုဆိုးရွားတဲ့ကပ်ရောဂါအဖြစ်ပြန်ရောက်လာတာ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီနှစ်တော့ Netflix ကနေ Season3ကိုပြသမယ်လို့ ကြေညာထားပေမဲ့ မပြခင်လေးမှာ Season2အဆုံးကဇာတ်ကောင်အသစ်ကို အကြိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ Kingdom: Ashin of the North ဆိုတဲ့ movie ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အပင်လေးရဲ့မူလဌာနေဖြစ်တဲ့ ယောဂျင်ခရိုင်က Ashin ဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ နောက်ကြောင်းကိုဒီကားလေးမှာခံစားကြည့်ရှုရမှာပါ။ Ashin ဟာ ဒီကပ်ရောဂါအတွက်အဆုံးအဖြတ်ဖြစ်လာမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုမသိရခင် သူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကို ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ပါ။
Main Castတွေကတော့ အရင် season တွေကအတိုင်းဖြစ်ပြီး Ashin နေရာမှာတော့ မင်းသမီးချောJun Ji-hyun ကပါဝင်ထားပြီး Kingdom အလွမ်းပြေကြည့်ရှုဖို့ Gold Channel မှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Translated by Anthena and Faith
Download G Drive FHD Myanmar2gb
Download Mega FHD Myanmar2gb
Download Userdrive HD Myanmar 700 mb
Download Mega HD Myanmar 700 mb
Download G Drive HD Myanmar 700 mb
KeeshaSeptember 4, 2021Reply
site is in the very same niche as yours and my users would truly benefit fromalot of the information you present here.
DanaSeptember 3, 2021Reply
blog loading? I’m trying to determine if itsaproblem on my end asmr or
JedSeptember 2, 2021Reply
Hi everyone, it’s my first payaquick visit at this scoliosis surgery web page, and post is really fruitful in favor of me, keep up
RossSeptember 1, 2021Reply
Feel free to surf to my site … asmr why
JulianAugust 31, 2021Reply
Here is my blog: why quest bars (t.co)
SheritaAugust 30, 2021Reply
Also visit my blog :: quest bars why [t.co]
AubreyAugust 28, 2021Reply
no longer positioning this submit upper! Come on web hosting
Kyaw ZinJuly 24, 2021Reply
BreyJuly 23, 2021Reply
Link ma Twae woo yw